Dunida Iyo Siyaasadaha Is Adoonsiga | Dhaymoole News
Dunida Iyo Siyaasadaha Is Adoonsiga
Deegaankan Catolnoa ballac dhulkiisu waa 32108 km2 , dadka ku nool ayaa dhan 7523 Milyan, waxaana ay haystaan xukun hoosaad. luqaada ay ku hadlaan wa afka Catlonia kuma hadlaan luqadda Spanishka.
Sababaha keenay inay catolinya doonayaan inay noqdaan dal madax banaan waxa ka mid iyagoo aad uga cadhaysan sidii uu ula dhaqmay janaraalkii Spain xukumayay Gen.Faran 1939- 1975, kaasi oo gacan bir ah ku hayay deegaanadaasi.
laakiin sanadkii 1978 ayaa la siiyay xukun hoosaad mase ahayn mid ay weli ku qanceen.Ka sakow cadaadiska Cataloniya waxa mandaqad dhaqaalaheedu sareeyo iyadoo wershadaha iyo waxa soo saarkeedu badana yahay awgeed. Sanadkii 2014 dakhliga guud ee debedda ka soo galay ayaa gaadhay 200 bilion oo Euro ah, sanad kasta dakhligu dalku wuxu kordhaa 3%.
Waxa soo saarka gudaha ayaa sareeya (GDP), badeecadaha ay debedda u dhoofiso ayaa sanad kasta ka sii badan ka hore. Sidaasi darteed shacabka Cataloniya waxau ku doodayaan in lacagta ka soo xeroota iibka alaabooyinkooda ay ku dhacdo khasnadda dhexe ee Spain taasi oo aanay waxba ka faa’idin. Dhaqaalaha Catoliya wuxu qiyaas ahaan la mid yahay kan dalka Borqtiqiiska. Waana bulsho ku doodaysa inay u baahan tahay inay noqdaan dawlad ka madax banaan Spain madaama aanay dhaqan iyo luqad ahaanba ka duwan yihiin dalka Spain. Waxana dawladda Spein diiday afti deegaanka laga qaadi lahaa oo lagu dooran siin lahaa inay dawlad xor ah noqdaan iyo inay ka sii mid ahaadaan dhulka Spein. Tani waxay ka mid tahay midnimada caalamka ee beenta ah kuna dhisan isku dul noolaanshaha.